देशभर लकडाउन वा निषे`धाज्ञा हुने लगभग नि`श्चित - Nepali in Australia
देशभर लकडाउन वा निषे`धाज्ञा हुने लगभग नि`श्चित
October 13, 2020 October 13, 2020 autherLeaveaComment on देशभर लकडाउन वा निषे`धाज्ञा हुने लगभग नि`श्चित
काठमाडौं : स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय मा`तहातको इन्सिडेन्ट कमाण्ड सिस्टमले देशभरि २५ हजारभन्दा बढी सक्रिय सङ्क्रमित नाघे लकडाउन गर्नुपर्ने सुझाबसहितको निस्कर्ष निकाल्यो । मन्त्रालयले कोभिड–१९ क्रा`इसिस मैनेजमेन्ट सेन्टर ‘सी सी एम सी’लाई उक्त सिफारिश गरेको थियो । दुई साता पछि असोज २१ गते सक्रिय सङ्क्र`मितको संख्या २५ हजार नाघेको छ ।
सक्रिय सङ्क्रमितको संख्या २५ हजार नाघेको छ, मन्त्रालयको सिफारिश बमोजिम लकडाउन हुन्छ त ? प्रश्नको जवाबमा सरकारका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवाली भन्नुहुन्छ, “देशभरि लकडाउन गर्ने अवस्था छैन्, हटस्पट भएको क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेर कोभिड–१९ नियन्त्र`णको प्रयास गरिनेछ ।” प्रवक्ता ज्ञवाली कोभिड–१९ क्राइसिस मैनेजमेन्ट सेन्टर(सी सी एम सी)का सदस्य समेत हुनुहुन्छ ।
काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लामा हाल करिब १४ हजार सक्रिय सङ्क्र`मित छन् । उपत्यका हट`स्पटको रुपमा परिणत हुँदैछ । तर हट`स्पटको रुपमा परिणत भएपनि उपत्यकामा लकडाउन वा निषेधित क्षेत्र घोषणाको तयारी देखिन्न । सीसीएमसीले उक्त अधिकार स्थानीय प्रशासनलाई प्रत्यायोजन गरिसकेको छ ।
यस अघि पनि उपत्यकामा सङ्क्रमित बढ्दा स्थानीय प्रशासनले नै निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको थियो । यद्द`पी प्रवक्ता ज्ञवालीले हटस्पट क्षेत्रलाई निषे`धित क्षेत्र घोष`णा गर्न सकिने बताउनुभयो । यो खबर आजको गोरखापत्र दैनिकमा छापिएको छ ।
यौ*नको पा;वर तुरुन्तै अ;त्यधिक मात्रामा बढाउने घरेलु औषधी
विश्वविख्यात वैज्ञानिक हकिंगले तोकिदिए पृथ्वीको आयु, अब ६ सय बर्ष मात्र बाँकी !
आजदेखि निषेधाज्ञा झन् कडाः सबै पास रद्द, के छ नयाँ आदेशमा ?
May 5, 2021 auther
कोरोनाको त्रासले रितिंदै राजधानी काठमाडौँ : २ दिनमा १ लाखले उपत्यका छाडे
April 27, 2021 auther
May 25, 2021 auther
नेपालमा पनि २ जनामा ओमिक्रोन भेरियन्ट संक्रमण पुष्टि
संसारको सबै तरकारी मध्ये सबै भन्दा धेरै शरीरलाई फाइदा गर्ने तरकारी स्कुस
मंसिर २२ गते सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णय, २१ देखि २३ सम्म विद्यालय बिदा
युराेपकाे एउटा सहर जहाँ १३५ रुपैयाँमा घर पाइन्छ
जापान जाने क्रममा मलेसियामा अलपत्र परेका स्वदेश ३६ जना फर्किए, २ जना जापान गए